Dowladda Farmaajo oo ka hadashay duqeymihii Kenya ee deegaanno Gedo katirsan.
Saturday June 05, 2021 - 12:28:48 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Federaalka ayaa si mar la arag ah uga hadashay xasuuqii ay maalin ka hor ciidamada Kenya ka geysteen deegaanno katirsan gobolka Gedo.
Warsaxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in ciidamada Kenya ay si ula kac ah uduqeeyeen dhowr deegaan oo Gedo katirsan iyadoo ku marmarsiyoonaysa ladagaallanka Al Shabaab.
"Weerarkii cirka ee aan loo aabbo yeelin ee ka dhacay Ceel Cadde iyo Hisa-u-gur oo ka tirsan gobolka Gedo, Jubaland State, 3-dii Juun 2021, waa tusaalaha ugu dambeeyay ee hawlgallada Ciidanka Difaaca Kenya (KDF) ee keenay dhimashada iyo naafaynta dad rayid ah, oo ay ku jiraan haween iyo carruur oo si isa soo taraysa u noqdaya astaan aan fiicnayn oo ah hannaanka hawlgalka ee ciidamada cirka ee Kenya" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay dowlada Farmaajo.
Inkastoo dowladda Federaalka aysan codsan in ciidamada Kenya laga saaro Soomaaliya hadane waxay ciidamadaas ku eedaysay in ay geysanayaan gabood fallo waloow aysan ku dheeraan ka hadalka joogitaanka ciidanka Kenya.
”Waa tusaalihii ugu dambeeyay ee hawlgallada Ciidanka Difaaca Kenya (KDF) ee keenay dhimashada iyo naafaynta dad rayid ah, oo ay ku jiraan haween iyo carruurta oo si isa soo taraysa u noqdaya astaan ​​aan fiicnayn oo ah hannaanka hawlgalka ee ciidamada cirka Kenya” ayaa lasii raaciyay warka kasoo baxay Villa Somalia.
Qaraar 10 sano ka hor kasoo baxay baarlamaanka dowladda Federaalka ayaa lagu sharciyeeyay duullaanka ciidamada Kenya ee Gedo iyo Jubbooyinka waxaana xiligaas Villa Somalia ka talinayay Shariif Sheekh Axmed.
Sedax bilood ka hor Dubbe oo ah wasiirka warfaafinya xukuumada Farmaajo ayaa ciidanka Kenya ku eedeeyay in ay isaga baxeen Ceel Cadde iyo Buusaar isagoo joogitaanka ciidamadaas ka dhigaw daaw haboon.
Khamiistii lasoo dhaafay ayay aheyd markii ay diyaaradaha Kenya ay duqeymo aan loo aaba yeelin ka geysteen illaa 10 deegaan oo Gedo katirsan balse duqeynta ugu khasaaraha badan ayaa ka dhacday degmada Ceel Cadde halkaas oo ay ku shahiiday haweenay halka ay dhaawacmeen 5 kamid ah carruurteeda.
Kenya oo sheegtay in ay dib ufurayso safaaradeeda Muqdisho.